Izindlu Zezinhlekelele ze-Airbnb - Usizo Lwezinhlekelele
Ukusiza ngesikhathi senhlekelele
Indawo yokuhlala izivakashi ezigulayo
Izindlu Zezinhlekelele · Usizo Lwezinhlekelele
Bungaza abantu abadinga izindlu eziphuthumayo
Nikeza mahhala, indawo yokuhlala kwesikhashana kubantu abadinga indawo yokuyibiza ngekhaya.
Nikeza ngendawo yakho
Ukusiza omakhelwane emva kokuzamazama komhlaba:
Lapho izinhlekelele zihlasela, abantu abaningi badinga izindlu zesikhashana. Kungakhathaliseki ukuthi omakhelwane abangababaleki noma izisebenzi zosizo ezithunyelwe ukuyosiza, ikhaya linikeza abantu ithuba abalidingayo ukucabanga ukuthi yikuphi okulandelayo abangakwenza.
Ababungazi bangadlala indima ebalulekile ekusabeleni kwemiphakathi yabo kanye nokuhlenga - ngokunikela nje ngendawo yabo eyengeziwe. Kusukela ngo-2012, ababungazi bavule iminyango yabo kubantu abathintwe izinhlekeleleni emhlabeni jikelele.
Indawo yakho inganikeza induduzo kumuntu phakathi nesikhathi esinzima.
Indlela okusebenza ngayo
Ngazalelwa futhi ngakhuliswa eParis, ngithanda kakhulu ukuvula indawo yami futhi nginikeze indawo ephephile futhi ekhululekile.
Ukwakha iphrofayili yakho, uzocelwa imininingwane eyisisekelo njengegama lakho eligcwele, isithombe sephrofayili nekheli le-imeyili. Ungabelana ngokwakukhuthaza ukuthi ubungaze.
Sitshele ukuthi indawo yakho itholakala kuphi, bangaki abantu abangakwazi ukuhlala kuyo,nokuthi itholakala nini. Uma usuvele ungumbungazi, ungakhetha indlu esivele ikhona.
Igumbi lokugezela eli-1
Ngisebenzela inhlangano esiza labo abalahlekelwe amakhaya abo enhlekeleleni futhi bazama ukuvuselela impilo.
Izivakashi zizokuthumelela umyalezo uma zicabanga ukuthi indawo yakho ifanelekile, noma ungathintwa inhlangano engenzi nzuzo eyenza ukubhukha egameni lamaklayenti ayo noma izisebenzi zosizo, iningi lazo ezingamavolontiya. Ukwenza ukubhukha, izivakashi kufanele ziqinisekise ukuthi ziphelelwe indawo. Ungabuza imibuzo, uvumelane nemisebenzi okumelwe yenziwe futhi ubeke okulindelekile mayelana nokuhlala ngaphambi kokuzibopha.
Izindlu Zezinhlekelele zinamalinki ezinsizeni nezimpendulo zemibuzo evame ukubuzwa, futhi iqembu lethu lilapha ukukusekela uma unemibuzo njengoba ulungela ukufika kwezivakashi zakho. Ungaxhumana nezinhlangano ezingenzi-nzuzo noma isivakashi uma unemibuzo mayelana nokuhlala kwabo okuzayo.
ABANTU ABATHINTEKILE NGOKUQONDILE
Njengombungazi, ungase uthintwe abantu abahlukene abathintwe inhlekelele. Lokhu kungabandakanya abantu ababalekile noma amalungu emindeni yabasindile abafuna ukuba seduze nabo ngenkathi bethola ukunakekelwa kwezokwelapha.
Sisebenzisana nezinhlangano emhlabeni wonke ukusiza ukuhlinzeka izindlu zesikhashana kulabo abathunyelwe ukusekela imizamo yokusiza kanye nokuhlenga. Lokhu kungabandakanya abaphendulayo bokuqala, amavolontiya nezisebenzi zosizo ezingenzi-nzuzo.
Okudingayo ukuze ubungaze
Okudingeka nje ukwenze ukunikeza izivakashi indawo ezenza zizizwe zamukelekile futhi usize ukuphendula noma yimiphi imibuzo evelayo.
Ikhaya lonke noma ifulethi
Amasevisi kanye nama-toiletries ayisisekelo
Ukutholakala kwezinsuku ezingu-2 noma ngaphezulu ngokulandelana
Indlela esikusekelayo ngayo
Siyazi ukuthi lokhu kungaba nomuzwa wokuzibophezela okukhulu. Yingakho senza konke okusemandleni ethu ukunikeza izinsiza kanye nokuzivikela ngaphambi nangesikhathi sokuhlala.
Ukusekelwa ngocingo 24/7 kanye nezinsiza
Awuwedwa kulokhu. Ngaphezulu kweqembu le -Airbnb lokwesekwa kwamakhasimende kuka-24/7, uzofinyelela eqenjini elinobuchwepheshe unanoma yimiphi imibuzo mayelana nokubhukhwa Kwezindlu Zezinhlekelele.
Ukubuyiselwa komonakalo wendlu
Nakuba umonakalo oyingozi ungavamile, siyaqonda ukuthi ungadinga ukuvikelwa. Isiqinisekiso Sokubuyiselwa sizobuyisela wonke umbungazi ngezindleko zendlu kuze kufike ku-$ 1,000,000.
Imibuzo yakho iphenduliwe
Yini Izindlu Zezinhlekelele?
Ngubani ongabungaza Izindlu Zezinhlekelele?
Ngubani okufanelekelayo ukubhukha Izindlu Zezinhlekelele?
Ngikubhukha kanjani ukuhlala Ezindlini Zezinhlekelele?
Ngizilungiselela kanjani izivakashi Zezindlu Zezinhlekelele?
Ngingaxhumana kanjani nosizo lweZindlu Zezinhlekelele?
Joyina umphakathi ofuna ukubuyisela ngendlela entsha, enobuntu.
Thola izimpendulo ku-Help Center yethu noma uxhumane nathi .
Vakashela i-Help Center
Khetha ulimiisiZulu (ZA)Khetha uhlobo lwemaliRZAR